Tatoazy volana | Ny fanaovana tatoazy
Nat Cerezo | | tombokavatsa
Ny volana no mpiorina tantara sy nofinofy foana. Iza no mbola tsy nahaliana ny mahita ireo vava volana eny amin'ny volana, izay toa tarehy? Ny volana no ho mpiorina tantara maro hatrany ary hitohy ho toy izany amin'ny fiainan'ny olona maro. Ny Moon dia tandindona iray izay hahazo dikany arakaraka ny olona manao tombokavatsa azy, fa hazavana foana kosa amin'ny maizina.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny tombokavatsa ny volana sy ny dikan'izy ireo, satria ny kintana alina dia misy dikany maro samihafa. Ho fanampin'izany, hanome anao hevitra izahay ho an'ny tatoazy manaraka izay nifanaraka tamin'ny dikany tsirairay mba hahafahanao mahita ny endrika tsara indrindra.
1 Ny andriamby tsapantsika ho an'ny volana
2 Ny dikan'ny tatoazy volana
2.2 Volana dingana
2.3 Volana foko
2.4 Ny amboadia sy ny volana
2.5 Volana manjavozavo sy mihasimba
2.6 Tsy mendrika amin'ny volana
2.7 Volana miaraka amin'ny dreamcatcher
2.8 tantsambo Moon
2.9 Volana fanoharana kely indrindra
Ny andriamby tsapantsika ho an'ny volana
Ny volana dia famolavolana tatoazy izay nahasarika ny lehilahy sy ny vehivavy hatrizay ary hijanona ho toy izany ihany izy io tsy misy fisalasalana ny amin'ny hatsarana tafahoatra. Tatoazy izay nalaza hatrizay ary hitohy izao ary tsy afaka mahazo tatoazy ratsy tarehy ianao rehefa ny volana no mahery fo.
Ny volana, namana mahatoky amin'ny fanoherana ny mpanjaka kintana, sakaiza ary fahavalo ... ny hazavana ao anaty haizina, ny antony manosika ny angano maro izay nomen'ny olombelona fahefana foana ny herin'ny volanaHo singa iray hatrany amin'ny fiainantsika izay tsy azontsika hadino ny hahatsapa ho feno amin'ny tontolo iainantsika.
Ny dikan'ny tatoazy volana
Ny volana, amin'ny maha-tompon'andraikitra amin'ny tombokavatsa azy, dia manome be dia be ny tenany, na amin'ny endriny na ho an'ny dikany maro izay mety hananany. Manaraka izany dia hiresaka momba ireo loko maro loko indrindra izahay ary hanome anao hevitra ho an'ny tatoazy ho avy.
Ho an'ny olona maro ny masoandro dia maneho ny herin'ny lehilahy ary ny volana ny lafiny vehivavyIzany no mahatonga imbetsaka amin'ny tatoazy ny volana dia atambatra amin'ny masoandro. Io no tandindon'ny fandanjana voajanahary ny zavatra: maizina sy hazavana, lehilahy sy vehivavy, lahy sy vavy. Rehefa atambatra ireo singa ireo dia mampisy fandanjalanjana sy firindrana misy eo amin'izao tontolo izao.
anefa ny lamaody mahazatra sivy ambin'ny folo fampiarahana ny masoandro sy ny volana dia lasaMisy fomba mahaliana hafa koa hanararaotana an'ity tatoazy ity, ohatra, zaraina amin'ny olona iray na miaraka amina endrika marefo kokoa, entanin'ny mandalas.
Iray amin'ireo ohatra malaza indrindra amin'ity lafiny ity, ohatra, dia ny tatoazy entanin'ny yin sy yang ary izany dia manana ny masoandro sy ny volana ho mpanohitra.
kosa, Ny tatoazy volana koa dia afaka mahaleo tena nefa tsy mila manao tatoazy masoandro koa. Ny volana mihitsy dia manana dikany maro samihafa, na dia mety ho iray amin'ireo tena manontany tena aza ny momba ny fizotran'ny volana, izay heverina ho mariky ny tsy fahalavorariana, ny fahaterahana indray ary ny lafiny maintin'ny fiainana. Natiora.
Toy ny tatoazy, ny dingana amin'ny volana dia aseho amin'ny loko mainty sy fotsy matetika raha manaraka fomba tena misy. Na izany aza, dia tsara loko ihany koa izy ireo, ary amin'ny endriny mitsangana izay, ohatra, dia mitazona ny forearm na tongotra manontolo.
Ny volana iray avy amin'ny foko dia manana heviny tena mahaliana mifandraika amin'ny fifandraisana amin'ny tany sy ny toetran'ny olona manao tatoazy. Ny amboadia miaraka amin'ity famolavolana ity dia manamafy bebe kokoa an'io tandindona io. Na dia amin'ny endrika tatoazy amin'ny foko aza dia mazàna aseho amin'ny ranomainty mainty, araka ny hitanao amin'ny loko hafa dia toa tsara sy mahazo tombony koa izy ireo.
Ny amboadia sy ny volana
Ny angano amerikanina tera-tany taloha dia nilaza fa ny amboadia dia miandraikitra ny fiambenana ny kintana hariva (izany hoe Venus), angamba noho izany, ary noho ny fahazarany amin'ny alina, io biby io dia mifamatotra akaiky amin'ny volana. Ankoatr'izay, amin'ny teny anglisy dia ny volana fenomanana voalohany amin'ny taona dia fantatra amin'ny hoe volana amboadia.
Tsy misy fisalasalana famolavolana malaza be io ary manankarena dikany izay mijery tena tsara amin'ny endriny maro samihafa, na amin'ny amboadia mitombina, manome lanja bebe kokoa ny volana, miloko, mainty sy fotsy hahazoana loka ...
Volana manjavozavo sy mihasimba
Ireo dingana amin'ny volana koa Tena manankarena izy ireo amin'ny lafiny marika. Ohatra, ny Crescent Moon dia manana tandindona mifandraika amin'ny fahafaha-manao vaovao, fitomboana ary mandeha mankaiza. Mifanohitra amin'izany no misy, ny volana mihena dia mifandray amin'ny faran'ny dingana iray sy ny fiandohan'ny dingana iray hafa.
Ireo tatoazy ireo tsara izy ireo amin'ny endrika tsotra izany dia ahitana ny dingana tianao hisolo tena azy hanomezana azy ny laza mendrika rehetra.
Tsy mendrika amin'ny volana
Efa niresaka tamin'ny tranga hafa momba ny tsy fahita isika, izany fanehoana momba ny làlana manan-danja sy ara-panahy an'ny tsirairay. Rehefa ampiarahina amin'ny volana, izay tandindona mahery vaika amin'ny Hindoisma koa, dia mampita ny hafatra izahay fa ity làlana ara-panahy ity dia arahana tanjona kendrena hahazoana fahazavana madio sy tena izy.
Amin'ny tatoazy toy izany ny volana dia mijery tsara na amin'ny loko na amin'ny loko mainty sy fotsyMiankina amin'ny fanirianao hanome endrika mahaliana kokoa sy mahavariana ilay endrika ilay izy, na raha tianao ho malefaka kokoa sy malina izy, amin'izay ny tsipika manify amin'ny mainty no safidy tsara indrindra.
Volana miaraka amin'ny dreamcatcher
Na dia tsy misy ifandraisany amin'ny dikany manokana aza izy ireo, mpitazona nofy manana volana dia milay be. Ny volana dia mifamatotra amin'ny mpanonofinofy satria ny mpanonofinofy dia tokony hihetsika raha matory isika, mamela ny nofinofy tsara sy ny vintana hisintona ary hisambotra nofy ratsy. Amin'ny tatoazy, ny endrika saro-pantarina an'ny nofy mpanonofy dia mampatsiahy ny mandala, izay mety hitarika endrika tsara tarehy sy be pitsiny ary tena marefo.
Na dia tsy misy dikany aza izy io dia misy dia tandindon'ny taranaka iray manontolo natsangana tamin'ny taona sivifolo, angamba izany no mahatonga ny tatoazy Sailor Moon malaza be. Ity famolavolana ity dia saika tsy maintsy atao amin'ny fanaovana azy amin'ny loko, tsy hoe satria azo antoka fa tena faly ny valiny, fa ny maneho ny mpiady (na ilay mpiady izay misolo tena anao indrindra) miaraka amin'ny lokon'izy ireo, toy ity tatoazy Sailor Mercury mahafinaritra ity.
Volana fanoharana kely indrindra
Ary miafara amin'ny volana fanoharana kely indrindra isika, izany hoe ilay iray dia manodidina ny 384.400 XNUMX kilometatra miala eto, ohatra tsara ho an'ireo izay tia astronomia, siansa foronina na tantara. Safidio ny hiaraka aminy amin'ny mpanamory sambon-danitra na rokety ary ho an'ny endrika mainty sy fotsy hanampiana tantara an-tsehatra dia hahagaga fotsiny izany.
Hitanao fa ny tatoazy volana dia miankina amin'ny fomba tianao hanana tatoazy, misy ireo manao tatoazy antsasaky volana miaraka amin'ny saka, manampy ramanavy, vorona, kintana na rahona. Betsaka ny volavola tatoazy volana izay fa tsara kokoa ny fahitanao azy ireo ho anao ary safidinao izay tianao indrindra amin'ny volavolanao. Lazao aminay, misy dikany amin'ny volana ve izay manintona anao indrindra? Manana tatoazy miaraka amin'ity singa ity ve ianao ho mpilalao fototra? Midika inona izany aminao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » tombokavatsa » Tatoazy volana: ny dikany sy ny endriny rehetra
Ny tatoazy misy ny telozoro, ny geometry amin'ny fahefana